ज्योतिषविज्ञान भन्छ : यी महिना जन्मिने व्यक्ति करोडपति – Patrika Nepal
पुष ६, २०७८ मंगलबार 61
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गर्छ।
आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो। मङ्गलवार मङ्गलको हुन्छ भने बुधवार बुधको प्रभाव रहने गर्छ।
बिहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ। शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ।
यी ग्रहहरूले तपाईँको आयआर्जनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छन्। त्यसैगरि कुनै पनि मानिसको जन्म महिनाको प्रभाव समेत उसको जीवनमा पर्ने गर्छ आज हामी तपाईँहरूलाई महिना अनुसार व्यक्तिको स्वभाव र भाग्यको बारेमा बताउन जाँदैछौँ।
Prevप्राध्यापक निर्मला शारीरिक सम्बन्धको सट्टा दिन्थिन् डिग्रीको सर्टिफिकेट, यसरी भयो भण्डाफोर
Nextसर्पले टोकेर श्रीमतीको मृ’त्यु भयो भनेका श्रीमानको पोल जब डमी टेस्ट गरियो त्यसपछि खुल्यो सबै रहस्य !
बिहानै खाली पेटमा बिरे नुन पानी पिउनुहोस्, हुनेछ यस्तो चमत्कार !
अलिकति ज्व’रो आएको छ के गर्ने होला ? भनेर छोरीले फोनमा कुरा गरेकाे केहि समयपछी …!